ESI ARỤNYE ỌKWỌ ỤGBỌELU - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịchọta ma wụnye onye ọkwọ ụgbọ ala kaadị
Ugbu a, ndị ahịa na-azụkarị ndị na-ebi akwụkwọ na MFPs maka iji ụlọ rụọ ọrụ. A na-ewere Canon dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu na-arụpụta ngwaahịa ndị ahụ. Ngwaọrụ ha dị iche iche site n'iji nkwekọrịta eji ihe, ntụkwasị obi na arụ ọrụ zuru oke. N'isiokwu taa, ị nwere ike ịmụta iwu ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ na ngwaọrụ nke onye nrụpụtara ahụ n'elu.
Iji ngwa nke Canon na-ebi akwụkwọ
Ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị na-aghọtachaghị otú e si edozi ngwá ọrụ obibi akwụkwọ. Anyị ga-anwa inyere gị aka ịchọta ya, gwa gị banyere ngwá ọrụ na nhazi. Ọ bụrụ na ị na-aga ịzụta ihe nbipute, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mara onwe gị na ndụmọdụ ndị dị na ihe ahụ dị na njikọ n'okpuru.
Hụkwa: Otu esi họrọ onye nbipute
N'ezie, ị ga-ebu ụzọ meezi njikọ ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụla eriri USB sitere na Canon jikọtara ya na eriri USB, mana e nwekwara ụdị ndị nwere ike jikọọ site na netwọk ikuku. Usoro a yiri otu maka ngwaahịa sitere na ndị nrụpụta dị iche, n'ihi ya, ị ga-ahụ ntụziaka zuru ezu n'okpuru.
Ihe ndi ozo:
Otu esi ejikọ kọmputa na kọmputa
Ijikọ ihe nbipute site na Wi-Fi rawụta
Jikọọ ma hazie onye nbipute maka netwọk mpaghara
Ihe na-esote bụ iwu nrụpụtara nke software maka ngwaahịa gị. N'ihi ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, ọ ga-enwe ike ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na sistemụ arụmọrụ, a ga-enyekwa ndị ọzọ ọrụ iji kwado mmekọrịta ya na ngwaọrụ ahụ. Enwere ụzọ ise dị maka nyocha na nbudata ngwanrọ. Tinye na ha gụọ ihe ọzọ n'ihu:
Gụkwuo: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute
Ọrụ isi nke onye nbipute bụ iji bipụta faịlụ. Ya mere, anyị kpebiri ịkọwa ya ozugbo. Enwere nlezianya anya maka ọrụ ahụ "Nhazi ngwa ngwa". Ọ dị ugbu a na ntọala nke ọkwọ ụgbọala nwere ike ma nye gị ohere ịmepụta profaịlụ kachasị mma site na ịtọ ntọala kwesịrị ekwesị. Ịrụ ọrụ ọrụ a yiri nke a:
Meghee "Malite" ma gaa "Ogwe njikwa".
Chọta otu "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ".
Chọta ebe obibi gị na listi. Pịa aka nri na ya ma họrọ "Bido nhazi".
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na ngwaọrụ adịghị egosipụta na menu ị na-eji. Ọ bụrụ na ọnọdụ a mere, ị ga-eji aka tinye ya. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ ntụziaka na isiokwu a n'isiokwu na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Na-agbakwunye Windows
Ị ga-ahụ windo idezi ebe ị nwere mmasị na tab. "Ntinye ngwa ngwa".
Nke a bụ ndepụta nke parameters a na-ejikarị eme ihe, dịka ọmụmaatụ "Bipute" ma ọ bụ "Envelopu". Kọwaa otu n'ime profaịlụ ndị a iji tinye nhazi ahụ na-akpaghị aka. I nwekwara ike iji aka tinye ụdị akwụkwọ a na-ebu, ya na nhazi ya. O kwesiri ijide n'aka na enweghi ike ibute ogo obibi ya na onodu aku na uba - n'ihi nke a, a na-ebiputa akwukwo na adighi mma. Mgbe ị na-ahọrọ ntọala, echefula itinye ntughari ahụ n'ọrụ.
Gụkwuo banyere ọrụ obibi akwụkwọ dị iche iche na ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'okpuru ebe a. N'ebe ahụ ị ga-ahụ ntuziaka nhazi faịlụ, ndị ọkwọ ụgbọala, ederede na ndị nchịkọta foto.
Esi ebipụta akwụkwọ site na kọmputa na onye nbipute
Bipute foto 3 × 4 na ngwa nbipute
Mbipụta akwụkwọ na nbipute
Esi ebipụta ibe site na Ịntanetị na ngwa nbipute
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị na-enye Canon na-eji nyocha. Ọ na-enye gị ohere ịmepụta akwụkwọ edemede dijitalụ ma ọ bụ foto ma chebe ha na kọmputa gị. Mgbe nyochachara, ị nwere ike ịnyefe onyinyo, dezie ma bipụta ya. A na-eme usoro ahụ site na ngwá ọrụ Windows ọhụụ ma dị ka nke a:
Wụnye foto ma ọ bụ akwụkwọ na MFP dịka ntụziaka ya.
Na menu "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ" Right click on your device and select Malite nyocha.
Dọọ ntọala, dịka ọmụmaatụ, ụdị faịlụ ahụ nke a ga-enweta nsonaazụ, mkpebi, nchapụta, ọdịiche na otu n'ime ndebiri njikere. Mgbe pịa na Iṅomi.
N'oge usoro ahụ, ebula mkpuchi nke nyocha ahụ, hụkwa na ọ na-agbanye aka na ngwaọrụ.
Ị ga-enweta ọkwa maka ịchọta foto ọhụrụ. Ị nwere ike ịga ele nlele ahụ gwụrụ.
Kwadebe ihe ndị dị n'ime otu, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma tinye mgbatị ndị ọzọ.
Mgbe ịpị bọtịnụ ahụ "Bubata" Ị ga-ahụ windo na ọnọdụ nke faịlụ a zọpụta.
Lelee usoro ihe omuma ndi ozo n'isiokwu anyi.
Esi esi nyochaa site na ngwa nbipute gaa na kọmputa
Iṅomi otu PDF faịlụ
Ogige Egwu M
Canon nwere ngwa ngwa nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na akwụkwọ na ihe oyiyi, bipụta na usoro na-abụghị usoro ma mepụta ọrụ nke aka gị. Ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị niile dị na saịtị ahụ. A na-ejikọta ihe omume ahụ na ngwugwu ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ iche iche na nbudata ngwanrọ ọrụ na ngwa nbipute. Ka anyị leba anya na ihe atụ ole na ole na My Image Garden:
N'oge mbido mbụ, gbakwunye nchekwa ebe echere foto gị ka ngwanro na-enyocha ha ma na-achọta faịlụ ọhụrụ.
Nchịkọta nhọrọ igodo nwere ihe odide na nhazi ngwaọrụ.
Ka anyị nyochaa usoro nke ịrụ ọrụ ahụ na ihe atụ nke ọrụ ahụ "Mkpado". Nke mbụ, kpebie otu n'ime ndepụta ndị dị na gị.
Debe ihe oyiyi, ndabere, ederede, akwụkwọ, chekwaa akwụkwọ ahụ, ma ọ bụ gaa ogologo iji bipụta.
Ihe ọzọ dị iche iche a na-ahụghị na ngwá ọrụ mbipụta nke Windows bụ ihe e ji emepụta aha maka CD / DVD. K'anyị gaa na usoro ịmepụta ụdị ọrụ a:
Pịa bọtịnụ ahụ "Ọrụ ọhụrụ" ma họrọ ọrụ kwesịrị ekwesị site na listi.
Kpebie na nhazi ma ọ bụ hapụ ya ka o mepụta atụmatụ nke gị.
Tinye nọmba achọrọ nke foto na disk.
Kọwaa ihe ndị fọdụrụ na pịa "Bipute".
Na windo ntọala, ị nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ arụ ọrụ, ọ bụrụ na ejiri ọtụtụ, kọwaa ụdị na akwụkwọ nke akwụkwọ, gbakwunye akụkụ ma ọ bụ njedebe peeji nke ibe. Mgbe pịa na "Bipute".
Ihe ndị ọzọ dị na Ngwa M Image Ogige na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ ahụ. Nchịkọta mmemme bụ ihe omimi, ọbụna onye na-amaghị ihe ga-eme ya. Ya mere, ọ na-eme ka uche ghara ichebara ọrụ ọ bụla iche. Anyị nwere ike kwubie na ngwa a dị mfe ma bara uru nye ọtụtụ ndị nwere ngwá ọrụ Canon.
Anyị na-emeso atụmatụ ndị bụ isi nke ngwaahịa ndị dị n'elu, ma anyị ekwesịghị ichefu na nrụzi ngwa ngwa na-achọ mgbe niile iji dozie njehie, melite mmapụta mbipụta ma gbochie njọ malfunctions. Nke mbụ, ị ga-ekwurịrị banyere ngwaọrụ ngwanrọ bụ akụkụ nke ọkwọ ụgbọala. Ha na-agba ọsọ dị ka nke a:
Na windo "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ" pịa nri na nbipute gị ma mepee menu "Bido nhazi".
Pịa taabụ "Ọrụ".
Ị ga-ahụ ọtụtụ ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere ihichasị ihe ndị ahụ, jikwaa ike na ọrụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Ị nwere ike ịgụ ihe a niile site na ịgụrụ nnukwu isiokwu anyị na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Ntọala nhazi nke ọma
Mgbe ụfọdụ, ị ga-edozi mkpụrụ akwụkwọ ma ọ bụ ọkwa onk na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na ajụjụ. Nke a ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ ọkwọ ụgbọala na mgbakwunye ngwanrọ. N'okpuru ị ga-achọta ntụziaka banyere otu esi arụ ọrụ ndị a, bụ ndị ejikọtara iji MG2440 dị ka ihe atụ.
Debe ọkwa ink nke ọkpọ akwụkwọ nke Canon MG2440
Gbanwee pampers na Canon MG2440 nbipute
Echefula na onye nbipute chọrọ ịmalite ma dochie cartridges, ink nozzles mgbe ụfọdụ akpọrọ nkụ, akwụkwọ ejirila ma ọ bụ jideghị ya. Kwadebe maka mmalite mberede nke nsogbu dị otú ahụ. Hụ njikọ ndị na-esonụ maka nduzi na isiokwu ndị a:
Nhicha dị ọcha nke kaadị ntanetị
Na-ebugharị katriji na ngwa nbipute
Idozi akwụkwọ amagidere na nbipute
Ndozi nsogbu nsogbu akwụkwọ na nbipute
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa na njedebe. Anyị gbalịrị imepekwu na ikwu okwu banyere ike nke ndị na-ebi akwụkwọ Canon. Anyị na-atụ anya na ozi anyị bara uru ma nwee ike ịchọta ozi sitere na ya nke ga-aba uru n'oge mmekọrịta ya na mpempe akwụkwọ.